Ahoana no fomba hanangonam-bola amin'ny maisi automaatvastajad
Misy antony iray mahatonga ireo mpitoraka bilaogy marobe kuidasy hoe "ny vola ao amin’ny lisitra."
Ny ankamaroan’ny mpitsidika tranonkala dia tsy hiverina avy hatrany ho mpankafy mahatoky. Mety hanamarina ampolony izy ireo, na tranokala an-jatony amin’ity herinandro ity aas, ary indrisy fa mora ny manadino ny anaoorian’ny fanitsakitsahana azy – raha tsy mifandray amin’izy ireo ianao.
Mety hieritreritra ianao fa ny meedia sosialy no fomba tsara indrindra ahafahan’ireo mpitsidika liana. Ary ny fampahalalam-baovao sosialy dia manana ny fampiasany, fa raha ny fananganana ny mpihaino anao sy ny fametrahana ny blôginao dia tsy afaka mifaninana amin’ny mailaka izy.
E-post angamba ny teknolojia fahiny raha oharina amin’ny media sosialy, saingy mbola tsara kokoa ny fampahalalana ny hafatrao. Ao amin’ny haino aman-jery sosialy, ny hafatra dia hafahafa ary matetika no ripaka amin’ny feo rehetra. E-post, etsy ankilany, mijanona ao amin’ny famoahana publik, ary tsy mandeha raha tsy noraharahiana.
Ary amin’ny mailaka, tsy voatery hifanaraka amin’ny fihenan’ny tarehimarika, ny mari-pamantarana sary, ny tolotra oomena, na ny teny mampihoron-koditra.
Izany mahatonga ny vola ao amin’ny lisitra. Ity ny fomba ahazoana ny lisitra miasa ho anao.
1.1 1 – Optimuse e-posti vorm
2 Automaatvastaja Ahoana ny fomba hametrahana ny Automaatvastaja
3 Automaatvastaja tööriistad
3.1 1- pidev kontakt
3.3 3 – AWeber
Mazava ho azy, mba hahazoana vola avy amin’ny mailaka automaatvastaja, ianao aloha dia mila mpanjifa.
1 – Optimuse e-posti vorm
Hevero ny fampiasana sary tsy mampikorontana, mora ampiasaina ahafahana mahazo mpanjifany bebe kokoa. Eto amin’ny WHSR dia mampiasa Ninja Popups izahay. Ianao on muljetavaldav Ninja hüpikaknad, ka CodeCanyon. Manoro hevitra ihany koa izahay OptinMonster, Plugins WordPressi abil saate teada mamorona endrika opt-in form endrika.
Ny fomba amam-panao alefa ho an’ny mpanjifanao mailaka kokoa dia ny manolotra azy freebie, mänguasi ny e-raamat na ny mailaka, ho an’ireo mpanjifany vaovao.
Ny fomba fanorenana fanorenana hafa mahomby iray izay nanjary nalaza tato ho ato dia ny famolavolana votoaty, izay ahafahan’ny mpamaham-bolongana manolotra maimaimpoana maimaim-poana hanampiana ireo lahatsoratra manokana ("täiendada"), izay tsy misy afa-tsy amin’ny mpanjifa mailaka.
Na dia mila fampiasam-bola be loatra aza ny fandefasana freebies, mario ireo mpitoraka blaogy no mahita fa manampy amin’ny fampivoarana ny lisitry ny lisitry ny mailaka.
Na izany aas, ataovy izay hahatsiarovanao fa tsy mila mpividy intsony ianao – mila izany ianao jahisadam famandrihana.
Ny freebie anao dia tokony ho an’izay tian’ny mpiloka tianao hidina. Raha manintona ny mpihaino tsy met ny ny beebie, dia vao mainka mitombo ny tahan’ny fisoratana. Hevero ny fampiasana ny fanadihadiana ho an’ny mpamaky mba hahalalanao ny tena dikan’ny freebies ho an’ny mpihaino anao.
Automaatvastaja Ahoana ny fomba hametrahana ny Automaatvastaja
Mba hividianana ny mailaka automaatvastaja, dia mila zavatra hivarotana ianao.
Affiliate rohy dia fomba malaza hanangonam-bola amin’ny automaatvastajad mailaka. Azonao atao ny mampiasa tranokala toy ny Share A Sale hitomb tombontsoa amin’ny fiarahamonina, na mpiara-miombona amin’ny marika izay efa ampiasanao izay manana programme ailia, mänguasja ny anao web hosting ettevõte.
Azonao atao ihany koa ny mahazo vola amin’ny fivarotana vokatra sy tolotra anao manokana. Ny vokatra dizitaly, mänguasi ny fianarana sy ny eRaamat, dia fomba mahazatra hahazoana vola miditra. Na dia mitaky fampiasam-bola ho avy aza izy ireo mba hamoronana ny vokatra, dia afaka manohy ny fidiram-bola izy ireo raha vantany vao vita ny solosainao, tsy misy asa fanampiny takiana aminao.
4 modely ho an’ny mpampiasa lisans ho an’ny mpanjifa
Na izany aza, tokony hamela ny varavarana misokatra amin’ny varotra amin’ny mailaka tsirairay ianao. Na ny mailaka fampahalalana momba ny informati aa dia afaka miverina miverina any aminny tranokalanao, izay ahitan’ny mpitsidika rohy mba hividianana ny vokatrao na tsindrio ny rohy misy anao.
Amin’ny alàlan’ny mailakao voalohany, tokony hanorina fitokisana amin’ny mpihaino anao ianao. Raha vao manomboka fotsiny ianao ary mbola kely ny lisitrao, asa matahotra manasa ny mpanjifa hamaly ary mifandray aminao mivantana.
Ho an’ny harena ankapobeny, manolotra vokatra sy serivisy isan-karazany amin’ny vidiny isan-karazany mandritra ny seranam-piaramanidina manrantany. Satria tsy mandeha ny mailaka mivarotra fivarotana 500 iray, tsy midika izany fa tokony handao ireo mpanjifanao ireo ianao. Andramo ny fanitarana ny laharan-dalan’ny mpampiasa anao mba hanolorana $ mini-kisary 50 koa.
1- pidev kontakt
Anisan’ireo mpanentana mailaka hafa amin’ny mailaka, ConstantContact dia anarana mipetraka tsy tapaka (tsy misy marika natao). Ankoatry ny fahaiza-manaony fototra amin’ny turundus mailaka, dia niparitaka ihany koa ny vohikala mba hampidirana tolotra hafa mifandraika amin’ny varotra izay misy. Zahao hoe Ny famerenana ifanakalozana tsy tapaka Tim mba hahitana bebe kokoa.
GetResponse dia fitaovana elektronika mailaka nosoratana miaraka amin’ny lohahevitra lehibe amin’ny mpanoratra. Efa nandritra ny 15 taona izy ireo. Ampiasainay izany hanamboatra, handefa ary handefa mailaka an-tsoratra mailaka ho an’ny mpanjifanay amin’ny vidiny sarobidy. Zahao hoe Ny famerenana an’i GetResponse an’i Jerry mba hahitana bebe kokoa.
3 – AWeber
AWeber dia lisitry ny lisitry ny mailaka malaza izay ahitana fanasongadinana iray hafa. Manolotra ribrambaiko RSS ho min’ny mailaka ihany koa izy ireo mba hahafahan’ny mpampiasa anao mamoaka lahatsoratra farany amin’ny blôginao, ka mahatonga ny gazetinareo ho tanteraka.
MailChimp dia fitaovana malaza amin’ny alàlan’ny mailaka malaza noho ny fampiasany mora ampiasaina sy ny tagasihoidlik tsara tarehy (tsy lazaina intsony ny masokotokotikotika). MailChimp dia manolotra fitaovana fampiasa amin’ny ordinatera miaraka amin’ny kaonty karama fotsiny. Amin’ny fitaovana maoderina ataonao dia afaka mametraka mailaka maromaro ho an’ny mpanjifanao vaovao ianao, na mametraka mailaka alefa aorian’ny fisehoan-javatra maromaro (mänguasi ny fandefasana tapakila aorian’ny fividianana entana iray).
Na dia maka fotoana ahafahana manangana ny mailaka mpanangom-bola elektronika aasa, raha vantany vao tafapetraka izy ireo, dia mety ho loharanom-bola aso antoka ho an’ny mpitoraka blaogy sy ny orinasa an-tserasera.
Misy Antony Iray mahatonga ireo mpitoraka bilaogy marobe miteny hoe "ny vola ao amin’ny
Misy antony iray mahatonga e zezë mpitoraka bilaogy marobe miteny hoe "ny vola ao
7 Netwerks Soċjali mhux tas-soltu (izda b’saħħithom) Freelance fra Blog-Bloggers
Чести грешки в граматиката и как да ги избегнем в своя блог